Jaliyadda Ogadenia ee wadanka Switzeland oo kulan muhiim ah isugu timid faraxdna ku soo gabagabeeysay. Dec 9, 2012 (QOL) Jaaliyada Ogadenia ee Wadadnka Switzeland ayaa kulan muhiim ah isugu timid waxaana lagaga hadlayay waxaqbadka Jaaliyada, kulanka waxaa ka qayb galay, shirka oo ku fuurmay jawii fiicaan waxa kaqayb aglay Maamulka iyo hawlawdeenada Jaliyada waxayna lafogureenqodobo muhiimah oo lagu geedi galin doono hawlaha Jaaliyada.
Dib u milicsiga waxqabadkii sanadkan dabayaaqada ah ayaa si aad ah loogu nuux nuuxsaday waxaana la isla qiray habka mamul wanaga ee ay Jaaliyadu u dhisantahay waxaa kaleoo laislagartay in kor loosii qaado waxaqbadka Jaaliyada lanadardar galiyo.
Jaaliyada Ogadenia ee Wadadnka Switzeland waxay xoosta kaaxriiqeen in ay siahgar la’aan ah ugarab istaagayaan una hiilinayaan shacabkadulaman ee Ogadenia waxaa akle oo ay balan qaadeen in ay hiiliyohookama dambays ah lagarab istaagayaan halganka xaqa ah ee dadkaiyo dalka Ogadenia lagu xoraynayo hormuudkana ay u tahay Jabahadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya (JWXO).
Jaaliyadu waxay garqaastaya in ay sanadka 2012 ay wax badan qabteen loona bahan yahay in lasii kobciyo awooda Jaaliyada, midnimada iyo dadaalka dhan walba ah ee ay Jaaliyadu wado.
Si kastaba ha ahaaatee Jaaliyada Ogadenia ee Dalka Switzerland ayaa marba marka ka dambaysa hawlaha ay halgankaOgadenia ku taageerayaan sii dardar galiinayso.